मानिसका लागि घर किन आवश्यक छ ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मानिसका लागि घर किन आवश्यक छ ?
२०७१ जेष्ठ ४, आईतवार ०२:२२ गते
हामी सबैको घर हुन्छ । त्यसो त, पशुपक्षी पनि घरबारविहीन हुँदैनन् । यद्यपि, पशुपक्षी र जीवजनावरहरुले विश्राम गर्ने र हामी मानिसले विश्राम गर्ने घरको स्वरुप उस्तै र एउटै हुँदैन, तापनि सबैको आ–आफ्नो हैसियत र अवस्थाअनुसार सबैको घर भने नभई हुँदैन । यसको अर्थ घर जीवित प्राणीको आवश्यकता हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
मानिस कहिल्यै पनि एक्लै बाँच्न सक्दैन । पशुप्राणी पनि समूहमै हिँड्छन्, चर्छन् र रमाउँछन् भने हामी मनुष्यका लागि त झन् समूहको आवश्यकता अझ बढी हुने गर्दछ । प्रकृतिले नै हामीलाई ‘तिमी मिलेर बाँच, मिलेर रमाऊ र मिलेरै अघि बढ’ भनेर पठाएको छ । घर पनि एउटा समूह हो, अलि धेरै भावना र विचार मिल्ने सदस्यबीचको समूह । घरका मानिसका बीचमा जुन आत्मीयता हुन्छ, त्यो आत्मीयता अन्य मानिससँग हुँदैन ।
समाज हाम्रो अर्को घर हो भने घर पनि समाज हो । अर्थात्, समाजमा पनि हामी मिलेरै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा रूचि, शैली र आवश्यकताहरुमा पर्याप्त भिन्नताहरु हुन्छन् । समाजमा विभिन्न खाले वैचारिक, भौतिक एवम् संस्कारगत विभिन्नतालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनाले कुनै एक जना मानिसको विचार मात्रै त्यहाँ सम्बोधित हुन सक्दैन । सबैका थोरैथोरै रूचि र आवश्यकताहरुलाई एकमुष्ट सम्बोधन गरी तयार पारिएका विधि–नियम र आदर्शहरु नै सामाजिक मूल्यहरु हुन् । त्यसैले, सबैका रूचि र आकाङ्क्षाहरुलाई सम्बोधन गरी तयार पारिएका सामाजिक मूल्य र आदर्शहरुप्रति उत्तरदायी हुनु समाजका प्रत्येक सदस्यको अहो दायित्व हो ।
घर प्रत्येक मनुष्यको ऊर्जाभूमि पनि हो । हामीले गरेका कामहरु सबैभन्दा पहिले परिवारका सदस्यहरुबाट अनुमोदित हुनुपर्दछ । परिवार पनि समाजको एउटा सानो इकाइ हो । यदि घरका सदस्यले हामीलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनेको छ भने समाजले पनि हामीलाई सम्मान गर्ने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ, किनकि समाजमा बस्ने अन्य मानिसहरु पनि घरमै बस्ने मानिसहरु हुन् । समाज र परिवारका इच्छाहरु लगभग उस्तै हुन्छन् । परिवारको इच्छा अलि सीमित हुन्छ भने सामाजिक इच्छा अलि असीमित हुन्छ, त्यत्तिमात्र हो । त्यसैले, घरको कुशल व्यवस्थापन गर्न सिपालु व्यक्ति समाजको पनि कुशल व्यवस्थापक बन्न सक्दछ ।
घरको वातावरण जति प्रेमपूर्ण, भावनात्मक र हार्दिक हुन सक्यो, त्यति नै हामी हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्यहरुप्रति सशक्त र सुदृढ हुन सक्दछौँ । परिवारका प्रत्येक सदस्यका बीचमा एकता, विश्वास, प्रेम र सद्भाव छ भने त्यस्तो घरपरिवारको वातावरण साँच्चै ऊर्जाशील हुन सक्दछ । शान्ति, एकता, विश्वास र परस्परको सद्भावले पूर्ण परिवारका सबै सदस्यहरु शारीरिक र मानसिक दुवै तरिकाले स्वस्थ, पवित्र र सुदृढ हुने गर्दछन् ।
जुन परिवारमा शान्ति छैन, घरका सदस्यहरुबीच बारम्बार भैmझगडा भइरहन्छ, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्था रहँदैन, त्यस्तो घरपरिवारको उन्नति र प्रगति कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । धेरै धनसम्पत्ति भएर पनि मानिसले परिवारको सद्भाव, प्रेम र सहयोग पाउन सकेन भने ऊ विक्षिप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ, धनसम्पत्ति हुनु र नुहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा बसेर मात्रै हुँदैन । एकले अर्काको अनुपस्थितिमा पारिवारिक निष्ठा कमजोर हुने, शङ्का–उपशङ्का पैदा हुने काम गर्ने प्रवृत्ति यदि परिवारका सदस्यबीच देखा प¥यो भने फेरि घर वास्तवमा घर कहिल्यै बन्न सक्दैन ।
जहाँ ‘भर’ हुँदैन, त्यो घर
होइन । घरका सबै सदस्यले एकअर्कालाई विश्वास गर्नुपर्दछ, भर गर्नुपर्दछ । ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो । परिवारका हरेक सदस्यहरु एकअर्काबीचको आड र भरोसामै बाँचेका हुन्छन् । प्रत्येकले हामीमाथि भर गरेका
हुन्छन् । हामीले आफ्नै परिवारका सदस्यको भर र विश्वास गुमाउन थाल्यौँ भने घरको एकतालाई सुरक्षित राख्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले घरमा प्रेम, विश्वास र सम्मानको वातावरण कायम राख्न परिवारका सबै सदस्य उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्दछ । जुनदिन घरका सदस्यहरुमाथि भर पर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यसैदिनदेखि घर भत्कने क्रम सुरू हुन्छ ।
प्रेम नै सबै समस्याहरुको अन्तिम निकास हो भनेर भनिन्छ । परिवारका कनिष्ठ सदस्यहरुलाई वरिष्ठले सधैँ प्रेम गर्नुपर्दछ भने कनिष्ठहरुले अभिभावकहरुलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्दछ । त्यसैले, हामीकहाँ मातापितासहित अन्य ठूलाबडालाई नमस्कार, ढोग र प्रणाम गर्ने पद्धति छ । यसको अर्थ पारिवारिक एकता र अक्षुण्णता कायम राख्नका लागि प्रेम र सम्मान दुई अनिवार्य आवश्यकता हुन् भन्ने हो । खासगरी, परिवारका ठूला सदस्यले सानाका कुरा नसुन्ने, उनीहरुसँग रिसाउने, झर्कने र मह¤व नदिने गर्नुहुँदैन । उनीहरु साना छन्, यसैले नबुझेर उनीहरुबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ । त्यो गल्ती फेरि नदोहो¥याउन सानालाई ठूलाले प्रेमपूर्वक सम्झाउन, बुझाउन सक्नुपर्दछ ।
सामाजिक बेमेल र असमझदारीको कारक भनेको अन्ततः पारिवारिक बेमेल र असमझदारी नै हो । यदि हामीले आफ्नै परिवारमा एकता र समझदारीको अभ्यास गरेका छौँ भने बाहिर पनि त्यही अभ्यास गर्ने गर्दछौँ । घरपरिवारमा मिलेर बसेको व्यक्ति समाजमा पनि मिलेर नै बस्न खोज्छ । यदि हामी बसेको टोल, छिमेक र समाजमा शान्ति, एकता र मेलमिलापको वातावरण छ भने हामीले के बुझ्नुपर्दछ भने जहाँ हामी बसेका छौैँ, त्यो टोलका प्रत्येक घरपरिवारमा एकता र समन्वय छ । सुन्दर समाज सुन्दर घरहरुको समष्टि हो । सुन्दर र एकीकृत घर नै एकीकृति समाजको आधार हो ।
सँगै रहँदा, बस्दा बेलाबेलामा परिवारका सदस्यबीच भनाभन, असमझदारी र कटुता पैदा हुने अवस्था पनि आउँछ । त्यसलाई सामान्य मान्नुपर्दछ, किनकि हामीभित्र फरक–फरक शैली, शिल्प र स्वभावहरु छन् । फरक–फरक रूचि, काम गर्ने तरिका र स्वभावका कारण परिवारका सदस्यबीच यदाकदा हुने विवादलाई छलफलका रुपमा स्वीकार्न सक्नुपर्दछ । मौसम पनि एकनासको हुँदैन । वातावरणमा पनि चिसो र तातो हुन्छ, उज्यालो र अँध्यारो हुन्छ । हामीबीचमा पनि त्यस्ता चिसा क्षणहरु आउन सक्दछन् समय–समयमा, तर तिनलाई हामीले मौसममा आउने क्षणिक अवस्थाका रुपमा स्वीकार्ने साहस गर्नुपर्दछ ।
परिवारका सदस्यका बीचमा हुने अनेक मनमुटावहरुलाई लिएर घरलाई अशान्त र कमजोर भने कहिल्यै पनि तुल्याउनुहुँदैन । यसको अर्थ घर कहिल्यै पनि छोड्नुहुँदैन भन्ने होइन । कहिलेकाहीँ घर छोडेर, आफ्नो गाउँ छोडेर टाढा जाँदा हामीलाई थाहा हुन्छ, घरको अनिवार्यता र आवश्यकता । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेभैmँ घर चिन्न घर छोड्नुपर्दछ, तर घर कहिल्यै पनि बिर्सनुहुँदैन । किनकि, घरले नै हामीलाई बढाएको हुन्छ, पढाएको हुन्छ र उन्नतिको सोपान चढाएको हुन्छ ।
‘घर देखे कुकुर बलियो’ भन्ने त आहानै छ । आफ्नो पन, आफ्नो परिचय सबैका लागि प्रिय हुन्छ । मान्छे त झन् रातदिन घरकै वातावरणमा बाँच्ने र रमाउने गर्ने हुनाले उसका लागि घर अन्य प्राणीका तुलनामा विशेष प्रिय र अत्यावश्यक हुने गर्दछ । घरको मूल्य बाहिर जाँदा मात्र विशेष अनुभव गर्न सकिन्छ । सहयोग गर्ने मानिस हुँदैनन् । परिवारका सदस्यको प्रेम र संरक्षण प्राप्त गर्न सकिन्न । सँगै बसेर मन खोलेर मीठोमसिनो खान पनि पाइँदैन । त्यसैले पनि घरबिनाको जीवन खासगरीकन मनुष्यका लागि दुःखदायी हुनेगर्दछ ।
समाजलाई पनि सिँगार्ने र सुन्दर बनाउने भनेको प्रेम र सम्मानले नै हो । यदि हामीले घरका सदस्यलाई सानालाई प्रेम र ठूलालाई आदर–सम्मान गर्ने बानीको विकास ग¥यौँ भने घरबाहिरको समाजमा पनि हाम्रो त्यस्तो संस्कारको प्रभाव पर्न थाल्दछ । त्यसैले, प्रेम र सम्मानले भरिएको घर समाज र राष्ट्रकै लागि आदर्श बन्न सक्दछ ।
घरको वातावरण शान्त, सुन्दर र स्वस्थ राख्ने अर्को मह¤वपूर्ण गुण भनेको इमानदारी हो । घरपरिवारका सदस्य इमानदार हुनुपर्दछ । एकले अर्काको आँखा छल्ने बानीले घर सुन्दर हुन सक्दैन, अझ कुरुप भएर जाने स्थिति हुन्छ । हामीभित्र अनेक रूचि र चाहनाहरु हुन्छन् । ती सबै चाहनाहरु घरभित्रै पूरा गर्न सकिन्छ । यदि पूरा सकिँदैन भन्ने लाग्दछ भने त्यस्ता इच्छाहरुले गर्दा नै घरको एकता छिन्नभिन्न हुने अवस्था सिर्जना हुने गर्दछ । त्यसैले, हामीले इच्छा गर्दा पनि त्यस्तो इच्छा गर्नुपर्दछ, जुन घरभित्रैका स्रोतसाधन र सदस्यहरुमार्फत पूरा गर्न सकिने खालको हुन्छ ।
इच्छाको कुनै सीमा हुँदैन । हाम्रा आवश्यकताहरुलाई जति लम्ब्याउन पनि सकिन्छ, जति पैmलाउन पनि सकिन्छ । त्यसोभएको हुँदा, हाम्रा इच्छा र आवश्यकताहरुको आयाम त्यति मात्र बनाउनुपर्दछ, जति हाम्रो घरपरिवारलाई स्वस्थ, सुन्दर, एकीकृत र सद्भावपूर्ण बनाउनका लागि आवश्यक पर्दछ । इच्छाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै गृह व्यवस्थापन गर्न सक्नु हो । वरपरका मानिस, छरछिमेकी, इष्टमित्र र शुभेच्छुकहरुले जेजे गर्दछन्, हामीले पनि तिनैतिनै गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताले घर सधैँभरि सुन्दर रहन सक्दैन । यद्यपि, हाम्रो घरमा समाज र हाम्रा छिमेकीको पनि धेरथोर प्रभाव परेको हुन्छ नै, तर पनि हाम्रो घर आपैmँमा स्वायत्त र पूर्ण मौलिक हुन्छ, हुनुपर्दछ ।
समाजमा भएका साझा मूल्य र आदर्शहरुमा हामी उस्तै भए पनि हाम्रा चिन्तन, काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिहरुमा भने समाजका प्रत्येक सदस्यभन्दा भिन्न हुन्छौँ, किनकि हामी हाम्रो आफ्नै मौलिकता लिएर बाँचिरहेका हुन्छौँ । छिमेकीसँग धेरै पैसा र धनसम्पत्ति हुन सक्दछ । हामीसँग उसको तुलनामा अलिकति कम होला, तर यसले के फरक पार्दछ र ? अलि विशाल भएर सोच्ने हो भने छिमेकीका तुलनामा हाम्रो सम्पत्तिमा रहेको कमीलाई नै
हामीले हाम्रो आफ्नो आदर्श बनाउन सक्दछौँ, मौलिकताका रुपमा व्याख्या गर्न सक्दछौँ ।
हामी हाम्रो घरको मौलिकता नमरोस् भनेर सधैँ सचेत हुनुपर्दछ । समाजमा जुन किसिमको विविधता छ, त्यसैले गर्दा समाज यति सुन्दर देखिएको हो । बगैँचामा फुलेका थरीथरी पूmलहरुका कारण नै बगैँचा सुन्दर देखिएको हो । त्यसैले, विविधतामा एकता नै समाजको विशेषता हो । हाम्रो घरको फरकपन समाजरुपी बगैँचामा फुलेको सुन्दर पूmलजस्तै सुन्दर छ भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ ।
जुन घरमा प्रेम र सम्मानको वातावरण छ, जहाँ परिवारका प्रत्येक सदस्यले एकअर्कालाई उच्च विश्वास र निष्ठा प्रदान गर्दछन्, वास्तवमा त्यही परिवार पवित्र हुन्छ, त्यही परिवार पूर्ण हुन्छ । परिवारका सदस्य यदि एक्लाएक्लै बाँच्न थाले भने परिवारको अस्तित्व पनि समाप्त भएर जान्छ । परिवारको खुसी, एकता र सौन्दर्यका लागि पनि हामीले आ–आफ्ना स्वार्थ र अवाञ्छित मनोकाङ्क्षाहरुमा संयम कायम गर्न सक्नुपर्दछ । घरका सदस्य कसैमा पनि लोभ, पाप, ईष्र्या, क्रोध र प्रतिशोधजस्ता दुर्भावहरु भएनन् भने साँच्चै नै त्यो घर गङ्गाजस्तै पवित्र हुन पुग्दछ । जुन घरमा यस्ता दुर्भावहरु हुँदैनन्, यथार्थमा त्यही घर समृद्ध
घर हो ।
टोलछिमेकका सदस्यहरुका व्यवहारहरुले एकअर्कालाई पनि प्रभावित पारिरहेका हुन्छन् । आखिर मानिस घरबाट निस्किएपछि समाजमै आउने हो, टोलछिमेकमै आउने हो । घरपरिवारभित्रको शक्तिले कहिलेकाहीँ कतिपय अप्ठ्याराहरुलाई सहज किनारा दिन सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा पनि छिमेकीहरु हाम्रा सहयोगी हुन आइपुग्दछन् । हामीले त्यतिखेर आ–आफ्ना घरभित्र विकास गरेका संस्कारअनुसार छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने गर्दछौँ । त्यसैले, पनि हामीले छिमेकीसँग केही न केही सिकिरहेका हुन्छौँ र केही न केही सिकाइरहेका हुन्छौँ ।
एउटा पवित्र र निर्मल वातावरण भएको घरको प्रभाव अन्ततः राष्ट्रव्यापी हुन पुग्दछ भनेर कन्फ्युसियसले पनि भनेका छन् । आज समाज प्रदूषित भएको छ । मानिसहरुमा लोभानिपापानि बढेर गएको छ । कसैले कसैलाई नटेर्ने, नसुन्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । धेरै शिरहरु अभिमानको टोपी लगाएर ठडिइरहेका छन्भैmँ लाग्दछन् । समग्रमा सामाजिक सङ्गति र शान्ति दुवै भङ्ग भएर गएका छन् । यसो हुनुपछाडिको कारण व्यक्ति स्वयम्भित्र शान्त र सुसङ्गत हुन नसक्नु हो, परिवारलाई सुसङ्गत तुल्याउन नसक्नु हो ।
आज मान्छे एक्लो हुन बरू तयार छ, तर कसैसँग सम्झौता गर्न तयार देखिँदैन । कसैसँग नम्र हुन र अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन । यस्तो किसिमको सम्झौताहीन र अभिमानपूर्ण सभ्यताले गर्दा नै आज घरहरु टुक्रिएका छन् । हिजोभन्दा धेरै घरहरु आज बनेका त छन्, तर ती प्राण नभएका घर बनेर ठडिइरहेका छन् । यस्तो लाग्दछ, मानिसहरु टुक्रँदै गएका छन्, विभाजित हुँदै गएका छन् र त्यही कारणले नयाँनयाँ घरहरु बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । घरभित्रको प्राण भनेको त परिवारका सदस्यबीच निःस्वार्थ एकता, विश्वास र मेलमिलाप कायम हुनु हो । मान्छे आवेशमा आएर घर छोड्ने, परिवारदेखि भिन्न भएर बस्ने र पूर्णतः एकलकाँटे जीवन यापन गर्ने निर्णय गर्न पुग्दछ, तर फुर्सदमा भने नराम्रोसँग पछुतो मान्दछ । जसले घरपरिवार छोडेर बसेका हुन्छन् एक्लो जीवन बिताएर, तिनलाई मात्र थाहा हुन्छ; घर नहुनुको पीडा र आफन्तहरुसँग अलग बस्नुपर्दाको छटपटी ।
हाम्रा कतिपय इन्द्रियगत स्वार्थ र इच्छाहरु पूरा हुन सकेनन् भनेर भएको घर पनि छिन्नभिन्न बनाई क्षणिक इन्द्रियतृप्तिको अभियानमा लागेका कुनै पनि मानिसले जीवनमा शान्ति पाएका छैनन् । पुरानो घर भत्काएर हामी चाहे जति धेरै घर बनाऔँ, कुनै घरभित्र हामीले शान्ति पाउन सक्दैनौँ । किनकि, शान्ति घरभित्र हुनुपूर्व हामीभित्र पैदा हुनु जरूरी छ । हामीभित्र त्यतिखेर मात्रै शान्ति हुन सक्दछ, जतिबेला हाम्रा इन्द्रियगत स्वार्थ र अभिमानका ज्वालाहरु शान्त हुन्छन् ।
शान्त व्यक्तिले नै सामाजिक सिर्जनाका अभियानहरुको नेतृत्व गर्न सक्दछ । घरको प्रेम, सहयोग, साथ र समर्थनमा नै व्यक्ति शान्त, सुन्दर र शक्तिशाली हुने गर्दछ । त्यस्तो शक्ति र संस्कार सम्पन्न व्यक्तिले नै समाजको रुपान्तरणमा सहयोग पु¥याउने हैसियत राख्दछ । घर नहुँदा प्रत्येक व्यक्ति अधीर, विचलित र तनावग्रस्त हुन पुग्दछ । त्यसैले, घर मानसिक स्वास्थ्यको अचुक ओखती पनि हो । घर हुनु भनेको प्रेम, हार्दिकता, विश्वास, सम्मान र समर्पणले भरिएका परिवारका सदस्य हुनु भनेको हो । यस्ता सदस्यले भरिएको घरबाट प्रत्येक व्यक्तिले साहस, आत्मविश्वास र उच्च मनोबल प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
त्यसैले, आउनुस् सबैभन्दा पहिले घरको आवश्यकता र अस्तित्वलाई स्वीकार गरौँ । मानिस समूहमा बस्ने प्राणी भएकाले जीवनभर ऊ घरपरिवारमै बस्नुपर्दछ । हामी जुन घरमा छौँ, त्यही घरलाई सुन्दर बनाउनेतिर लाग्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो । घरलाई सुन्दर बनाउनका लागि भित्तामा रङरोगन गर्ने कुरा त्यति मह¤वपूर्ण कुरा होइन, जति हामीभित्रको स्वभाव र प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा मह¤वपूर्ण छ । घरका सबै सदस्यसँग साँचो बोलौँ । परिवारका सदस्यको आँखा छलेर इन्द्रियतृप्तिको तुच्छ अभियानमा लाग्दा हामीलाई तत्कालको आनन्द त प्राप्त होला, तर दीर्घकालीन शान्ति र पारिवारिक एकताको अभाव भने आजीवन खट्किइरहन्छ ।
आजका ठूला विपत्ति र महामारीहरुमध्ये पारिवारिक विग्रह पनि एक हो । व्यक्ति शरीर र इन्द्रियका सामान्य इच्छा र आकाङ्क्षाहरुको परिपूर्ति गर्ने नाममा एक्लै बस्ने, रमाउने र खुसी हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तर, यो प्रवृत्तिले मानिस झन् दुःखी भएको कुराको प्रमाणका रुपमा पूरा युरोप हाम्रा अगाडि छ । सुरूमा परिवारबाट अलग रहेर बाँच्दा प्रसन्नजस्तो देखिए पनि अन्ततः एक्लै बस्ने व्यक्तिमा मानसिक समस्या पैदा हुने र त्यही समस्याका कारण व्यक्ति आत्महत्याको अवस्थामा पुग्ने गरेका घटनाहरु आज पश्चिमका मूल समस्या बनेका छन् ।
जीवनका लागि आवश्यक प्रेम, सम्मान, विश्वास, साथ, समर्थन र सहयोगमा स्वयम्भित्र आत्मविश्वास, साहस र शौर्यको विकास गरी जीवनका अप्ठ्याराहरुमा सहज आजीविका निर्वाह गर्न र समाजको उन्नतिमा टेवा पु¥याउन पनि हाम्रा लागि घरपरिवारको आवश्यकता पर्दछ । यसैले, घरपरिवारको आदर्श र मूल्य जोगाएर यसलाई सबल बनाउनतिर आजैदेखि लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । यदि परिवारका सदस्यका बीचमा गुनासा, असन्तुष्टि र मनमुटावहरु छन् भने पनि समुद्रको जस्तो विशाल मन लिएर ती विषयहरुमाथि आपसमा छलफल
गरौँ । कसैप्रति पनि घृणा र प्रतिशोध नराखी पूर्ण प्रेमका साथ यदि हामीले आफ्ना स्वार्थमा कटौती गर्दै परिवारका सदस्यका सार्थक गुनासाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने लाग्दछ, हाम्रो घरको एकता सदैव अक्षुण्ण र सुदृढ रहिरहने छ, कहिल्यै पनि टुक्रिने वा खण्डित हुने अवस्था आउने छैन । र, लाग्दछ यही नै घर नटुक्रिने उपाय हो ।